ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး သစ်တိုင်လုံးကြီးများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်း မြန်မာပြည်တွင် တည်ရှိသည် – Cele Channel
ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး သစ်တိုင်လုံးကြီးများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်း မြန်မာပြည်တွင် တည်ရှိသည်
Posted on December 3, 2017 Author Cele	Comment(0)
ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး သစ်တိုင်လုံးကြီးများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်း မြန်မာပြည်တွင် တည်ရှိသည်။
တိုင်တစ်လုံးတစ်လုံးကို ၇ တန်ကျော်တဲ့ တိုင်လုံးကြီးတွေနဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့
ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ ကမိုင်းကုန်းကျေးရွာက ကမိုင်းကုန်းကျောင်း
ကမ်ဘာ့ အကွီးမားဆုံး သဈတိုငျလုံးကွီးမြားနဲ့ တညျဆောကျထားတဲ့ ကြောငျး မွနျမာပွညျတှငျ တညျရှိသညျ။
တိုငျတဈလုံးတဈလုံးကို ရ တနျကြျောတဲ့ တိုငျလုံးကွီးတှနေဲ့တညျဆောကျနတေဲ့
ကရငျပွညျနယျကော့ကရိတျမွို့ ကမိုငျးကုနျးကြေးရှာက ကမိုငျးကုနျးကြောငျး
တစ်​ကိုယ်​လုံးက တန်​ဖိုး​တွေ တွက်​ပြ​တာ ​ခေတ်​စားလာ​တော့ကြုံဖူးတာ​လေး တွေမျှဝေလိုက်ပါတယ်
သူငယ်​ချင်း​… မင်း​သောက်​တဲ့အရက်​က ​သေး​ပေါက်​ရင်​ ​ရွှေပြန်​ထွက်​ကျတာလား..? တစ်​ကိုယ်​လုံးက တန်​ဖိုး​တွေ တွက်​ပြ​တာ ​ခေတ်​စားလာ​တော့ကြုံဖူးတာ​လေး ​ပြောပြချင်​တယ်​.. ဟိုးတစ်​​လောက အန်​ကယ်​တစ်​​ယောက်​ သူ့နာရီချွတ်​ပြီး ” ဒီနာရီဘယ်​​လောက်​တန်​မယ်​ထင်​လဲ မှန်းကြည့်​” ဆိုပြီး ကျွန်​​တော့်​ကို​​မေးတယ်​.. (သူကချမ်းသာ ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်​ရှင်​တစ်​ဦးပါ) “မမှန်းတတ်​ဘူးခင်​ဗျ” လို့​ပြောလိုက်​​တော့ သူက ပြန်​​ပြောတယ်​.. အ​မေရိကန်​​ဒေါ်လာ ၆သိန်း တန်​တယ်​တဲ့.. မြန်​မာ​ငွေနဲ့ဆို သိန်း ၇၈၀၀ ​ကျော်​တန်​တာ​ပေါ့.. (အမ​လေးဗျ… အံ့သြလို့မပြီး​သေး..) “ဟိုပွဲ ဒီပွဲ အခမ်းအနား​တွေမှာ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ ဖြစ်​​နေမှာစိုးလို့ ဒေါ်လာ ၆သိန်း ၇သိန်း တန်​ နာရီချည်း ၅ လုံး​လောက်​ ၀ယ်​ထားတယ်​” ဆို​တော့….. ဟို​က်……ရှားဘား…. ကျွန်​​တော်​ ပက်​လက်​လန်​သွားတယ်​… (ကိုယ်​​တွေ တစ်​မျိုးလုံး […]
ဧရာမကျောက်ဆောင်ကြီးအောက်တွင် ကြောက်မက်ဖွယ်တည်ရှိနေသည့် မြို့ငယ်
စပိန်နိုင်ငံရှိ ဆန်တီနယ်ဒီလက်စ်ဘို ဒီဂက်စ်မြိုတွင် မြို့ခံပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ကျောက်ဆောင်ကြီးအောက်တွင်မကြောက်မရွံ့နေ ထိုင်နေကြသည်။ နွေရာသီတွင်အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရန်နှင့် ဆောင်းရာသီတွင် အအေးဒဏ်ကို အံတုနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့က ကျောက်ဆောင်ကြီးအောက်တွင် မြိုကို တည်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ဆောင်ကြီးအောက်တွင် အိမ်များဆောက်လိုက်သဖြင့် ၎င်းတို့သည် အိမ်ဆောက်ရာတွင်မျက်နှာစာကိုသာ ဆောက်ရန်လိုတော့သည်။ ယင်းနေရာတွင် လူများနေလာကြသည်မှာ သမိုင်းမတိုင်မီကတည်းကပင်ဖြစ်သည်ဟု အများက ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုမြို့ကို အလယ်ခေတ် အာရေဗျဒေသခံများလက်ထဲမှ သိမ်းယူနိုင်ရန် ကက်သလစ်ခေါင်းဆောင်များက ခုနစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ စပိန်ရှိဒေသအများစုကို အထက်ပါ အာရေဗျများက ရာစုနှစ်များစွာ သိမ်းပိုက်ခဲ့ သည်။ ခုနစ်ကြိမ်မြောက်တွင်မှ ထိုနေရာကို ကက်သလစ်တို့ သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းနေရာသည် အီဘာရီယာတွင် မွတ်စလင်တို့၏ နောက်ဆုံးခြေကုပ်ဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးကြီးအောက်တွင်ရှိသဖြင့် သဘာဝအလျောက် အေးစိမ့်နေသည့်အတွက် ဒေသခံများက ယင်းနေရာတွင် ဒေသထွက် ကုန်စိမ်းမျိုးစုံ […]
စားသောက်ဆိုင်က ၀န်ထမ်းတွေ မပြောပြတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တချို့ရဲ့ ညစ်ပတ်မှုများ
Posted on November 17, 2017 Author Cele
Menu စာအုပ်တွေကို သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ကြပါဘူး ဆိုင်ကို လာမျှသူတိုင်းကို Menu စာအုပ်ချပေးတာကြောင့် လူတကာ ကိုင်ခဲ့တဲ့ Menu စာအုပ်မှာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေ အများကြီးရှိနေမှာပါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Good Morning America သိပ္ပံပညာရှင် အဖွဲ့ က စားသောက်ဆိုင် ၁၂ ဆိုင်ကို ၀င်ရောက်စစ်ဆေးရာ Menu စာအုပ်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယား နဲ့ Germs ၁ သိန်း ၈သောင်းခွဲ လောက် ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ငရုတ်ကောင်းဗူး၊ ဆားဗူးတို့ထက် Menu စာအုပ်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယား နဲ့ Germs တွေ ပိုများနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Menu စာအုပ်ကိုင်ပြီး ဟင်းလျာတွေမှာယူပြီးရင် လက်ဆေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ၀န်ထမ်းတွေက ဖျားလျက်နဲ့ […]
အိမ်ထောင်ပြုရမယ့် အရွယ် ကျော်သွားပြီ ဆိုတဲ့ နေတိုး
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် Super Moon ကို ဒီကနေ့ ညနေတွင်မြင်တွေ့ကြရမည်